Izindaba - Abathengisi bensimbi nabangaphakathi embonini babikezela ukuthi imakethe yensimbi izovuka maduze
Abathengisi bensimbi nabangaphakathi embonini babikezela ukuthi imakethe yensimbi izovuka maduzane
Usuku Lukazwelonke ngemuva kokufunwa kwensimbi luqinile, imakethe yensimbi kulindeleke ukuthi ikhuphuke kungekudala.
Ngokusho kwabathengisi bensimbi nabangaphakathi embonini. Ibha yamanje, ikhoyili eshubile eshisayo. Ikhoyili egoqiwe ebandayo nepuleti elishubile eliphakathi kanye nezinye izinhlobo ezithile zamathrendi ahlukene.
Ngokuya ngezinto zokwakha ibha, phakathi noSuku Lukazwelonke, isidingo esifundeni saseBeijing-Tianjin-Hebei sasingaphansi, futhi ngemuva koSuku Lukazwelonke, isidingo saqala ukwanda. Ingeniso yansuku zonke yanda kancane kancane, ikakhulukazi ekufunweni kwe-rebar engu-25 mm yanda kakhulu. Ngo-Okthoba 16, Imakethe yaseBeijing yomkhiqizo wensimbi waseChenggang ka-25 mm wentengo yamabhlokhi amanani we-3700 yuan / ton. Uma kuqhathaniswa no-Okthoba 9 up 40 yuan / ton, abathengisi bensimbi kanye nabangaphakathi embonini bakholelwa ukuthi, uma kubhekwa amanani entengo kaphethiloli aluhlaza kanye namanani entengo yesikhathi esizayo, imikhawulo yezemvelo ekwindla nasebusika yokuqinisa izinto, kulindeleke ukuthi inani lilonke lemakethe yensimbi yokwakha yaseBeijing ngasekupheleni kuka-Okthoba kuzovuka ngokuqinile.
Ikhoyili eshubile eshisiwe, ukusatshalaliswa kwensimbi eningizimu kanye nabangaphakathi embonini okutholwe ngemuva kophenyo, ngenxa yesidingo samanje seloli elisindayo lenyuke kakhulu. Isidubuli. Amaloli okulahla kanye neminye imishini yokwakha ifuna ukwanda, imizwa yamanje yamakholiji ashubile ashisayo. Ukudayiswa kwamaloli asindayo eChina kwafinyelela kumayunithi angu-136,000 ngoSepthemba, okwenyuka ngamaphesenti angama-63 ngonyaka, idatha ikhombisa. Izibalo ezivela kuChina Construction Machinery Industry Association zikhombisa ukuthi ngoSepthemba izinkampani ezingama-25 ezithintekayo kulolu cwaningo zathengisa imishini yokumba idatha engama-26,034, yenyuka ngamaphesenti angama-64.8 ngonyaka. Ngokwalesi sibikezelo, intengo yamakethe yekhoyili eshisiwe esanda kushaywa izodlala isimo esisebenza ngokuqinile.
Mayelana ne-coil plate ebandayo ebandayo, kusukela ngoSuku Lukazwelonke, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwezimboni zezimoto nezasekhaya eChina kuyachuma. Ngemuva koSuku Lukazwelonke, amabhizinisi aphansi komfula ngokuvamile anesidingo sokugcwalisa, okukhuthaza ukwanda kwesidingo sensimbi. Izibalo ezivela eChina Association of Automobile Manufacturers zikhombisa ukuthi imakethe yezimoto zabagibeli yafinyelela kumayunithi ayisigidi esingu-1.91 ngoSepthemba, ngokukhula konyaka nonyaka ngama-7.3%, nokugcina izinga lokukhula lonyaka nonyaka licishe libe ngu-8% izinyanga ezintathu zilandelana (7.7% unyaka nonyaka ngoJulayi no-8.9% unyaka nonyaka ngo-Agasti). Ukusebenza okuphelele kwesidingo esezansi kungcono, futhi intengo yemikhiqizo ebandayo ebandayo isekelwa ngokuqinile.
Epuletini elijiyile, uSuku Lukazwelonke ngemuva kwesifunda saseBeijing, iTianjin kanye neHebei ngentengo emakethe yamapuleti aminyene ukushaqeka okukhulu, kulindeleke ukuthi lo mkhuba uzoqhubeka kungekudala.
Abathengisi bensimbi nabangaphakathi embonini bakholelwa ukuthi imakethe yensimbi yamanje, izinto ezimbi, ziyaluka. Ngasohlangothini oluhle, ngoSepthemba, ukutshalwa kwemali okuphelele kumaphrojekthi amakhulu ezweni lonke kukhuphuke ngama-96.6% inyanga nenyanga, ngemuva kokuthi inzuzo yeNational Day yensimbi inyuke kakhulu, isekela inani lentengo eliqinile. Njengoba ukuhla komfula kukhuphuka. Izintengo zensimbi ezisele emuva zisenendawo yokwenyuka. Ngokombono we-bearish, uSuku Lukazwelonke ngemuva kwebanga lokukhula kwensimbi, ingcindezi yokwehlisa ayancishiswa; Inqubomgomo yokuqinisa emkhakheni wezezakhiwo; Ukukhiqizwa kwensimbi kwahlala kuphezulu; Ngemuva kokungena ekwindla nasebusika, ukwakhiwa esifundeni esisenyakatho kubhekene nezinto ezingezinhle njengokuma, okuzobuyisa ubungozi bentengo yensimbi esikhathini esizayo.
I-China Metallurgical News (I-Edishini 7, I-Edition 07, Okthoba 20, 2020)